Ciidanka Amniga Dowladda oo gurigiisa kala baxay nabad-doon caan ah | Goojacade
Home War Ciidanka Amniga Dowladda oo gurigiisa kala baxay nabad-doon caan ah
Ciidanka Amniga Dowladda oo gurigiisa kala baxay nabad-doon caan ah
Cidamada Dowladda Somalia ayaa xalay gurigiisa oo ku yaalla deegaanka Ceelasha Biyaha ee dulleedka Muqdisho kala baxay nabad-doon C/llaahi Xasan Abuurkan oo horay u soo noqday Afhayeenkii dhinaca siyaasadda ee odasyaasha beelaha Hawiye.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka dowladda ay xalay saqdii dhexe u dhaceen guriga nabaddonka oo ku yaalla Xaafada Shareeco oo ka tirsan deegaanka Ceelasha-biyaha, isla markaana ay kaxeysteen.
Sidoo kale, Wararka ayaa intaas ku daraya in gurigiisa iyo guryaha kale ee ku dhaw-dhaw ay ciidamada baaritaano ku sameeyeen, laakiinse weli la oga halka ay ciidamadu la aadeen nabaddoonka.
Dhanka kalae, Nabadoon C/llaahi Xasan Abuukar ayaa waxaa hadda ka hor xiray isaga iyo Axmed Diiriye Ciidamada Itoobiya ee joogay Somalia, wallow markii dambe ay soo daayeen, lama sheegin sabab loo xiray iyo dambi lagu helay intaba.
Tallaabada lagu xiray xalay ayaa waxay imaanaysaa iyadoo dhawaanahan ay ciidamada Amniga Dowladdu wadeen qorshayaal ay ku sugayaan amaanka, taasoo keeni karta in cidiamadu ay xiraan dad badan oo ay shaki ka qabi karaan iyo kuwo la tuhmayo.
Ugu dambeyn, Laamaha Amniga Somalia weli wax faah-faahin ah kama bixin hawl-galka Ciidammo ka tirsan kuwa dowladda Somalia ay xalay hoygiisa ay kala baxeen Nabad-doonka oo loo yaqaano C/llaahi Dheere.
Previous articleShirkadaha Isgaarsiinta oo lagu amray inay isku furaan khadadkooda Teleefanada
Next articleCabdiraxmaan Maxamed oo noqday gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya